Fisintahana fohy tany Arabia
(Mifototra amin'ny Gal. 1:11-18)
"Ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay Apostoly talohako aho, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray." — Gal. 1:17.
Notandindomin-doza ny ain'i Paoly, ka nandray baiko avy tamin'Andriamanitra izy mba hiala an'i Damaskosy mandritra ny fotoana fohifohy. Nankany Arabia izy, ka tao anatin'ny naha-irery azy tany no nananany tombontsoa betsaka hifandraisana amin'Andriamanitra sy handinihan-tena. Naniry ny hitoetra irery miaraka amin'Andriamanitra izy, handinika ny fony, hanamafy ny fibebahany, ary hampiomana ny tenany amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fandalinana mba hirotsaka amin'ny asa izay toa lehibe sy manan-danja loatra ho azy. Apostoly izy, tsy nofidin'olombelona, fa nofidin'Andriamanitra, ary nambara mazava tsara fa ho eny anivon'ny Jentilisa ny asany.
Tsy nifanerasera tamin'ireo apostoly hafa izy raha tany Arabia; nikatsaka an'Andriamanitra tamim-pahamatorana sy tamin'ny fony rehetra izy, tapa-kevitra ny tsy hitsahatra raha tsy efa fantany marimarina tokoa fa nekena ny fibebahany ary navela ny helony lehibe. Tsy havelany ny tolona raha tsy azony antoka fa hiaraka aminy amin'ny asany amin'ny hoavy. Tsy maintsy hoentiny eny amin'ny tenany ny mariky ny voninahitr'i Kristy niseho teo amin'ny masony, izay nohajambain'ny fahazavana avy any an-danitra, ka naniry koa izy ny hitondra mandrakariva miaraka aminy ny antoka ny amin'ny fahasoavan'i Kristy manohana azy. Nifandray akaiky tamin'ny lanitra i Paoly, ka niresaka taminy i Jesôsy, nampiorina azy tao anatin'ny finoany, ary nandrotsaka taminy ny fahendreny sy ny fahasoavany. — SR, tt. 274,275
Ireo rehetra izay tarihin'Andriamanitra dia mila ora tony ahazoany mifandray amin'ny fony, amin'ny zavaboary ary amin'Andriamanitra. (...) Ilainy ny hanao fanandramana manokana ny amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy ny tenantsika manokana no mandre Azy miteny amin'ny fo. Rehefa mangina ny feo hafa rehetra, ka miandry eo anatrehany amim-pahatoniana isika, dia hampahazava ny feon'Andriamanitra ny fanginan'ny fanahy. (...) Eo anivon'ny vahoaka miolomay, eo amin'ny fiainana mirimorimo noho ny asa be eo aminy, izay manavao ny heriny toy izany dia ho voahodidin'ny rivo-piainana feno fahazavana sy fiadanana izy. Handray hery vaovao na eo amin'ny ara-nofo na eo amin'ny ara-panahy izy. Ho hanitra mamerovero ny fiainany ka hampiseho ny herin'Andriamanitra izay hahatratra ny fon'ny olona.